Akụkọ - YUBEIYE Compression Flattening Ab Lipo Board Post Surgery Foam After Tummy Tuck Tabla Abdominal Moldeadora Grey
YUBEIYE mkpakọ Flattening Ab Lipo Board Post Surgery Foam Mgbe Tummy Tuck Tabla Abdominal Moldeadora Grey
Ahụ: 100% Polystyrene / mkpuchi: 88% naịlọn 12% Elastane
● Nkwado sitere n'akụkụ gaa n'akụkụ: YUBEIYEbọọdụ afọbụ nhọrọ kacha mma mgbe ịchọrọ nkwado ọzọ n'etiti ngalaba gị ka emechara usoro ịchọ mma.Bọdụ ab a nwere ọnụ mmiri dị nro nke na-agaghị emetụta akpụkpọ ahụ gị, ọ ga-echebekwa gị na tummy gị pụọ na ahụ erughị ala na nsogbu ndị na-eyi akwa.fajaosisi maka ogologo oge nwere ike iweta.
● NKWUKWU POST OP TANDEM na-enweghị ntụpọ: Yiri bọọdụ lipo a n'ime nhazi ahụ ahụ Post op ọ bụla ga-enyere aka na usoro mgbake.Ọzọkwa, bọọdụ liposuction a ga-eme ka mmetụta ịkpụzi ahụ onye na-eke eriri afọ gị nwere, na-achịkwa afọ gị na aka ịhụnanya ndị ahụ na-achọghị ka ọ na-egbochi njide mmiri, mpịaji akpụkpọ, na mgbakasị ahụ.
● Akpụkpọ anụ na-eche banyere gị na akpụkpọ gị: YUBEIYE Ab Board bụ ihe dị mkpa na mgbake gị mgbe ịwachara ahụ.Ejiri polystyrene mee bọọdụ ụfụfụ anyị, ihe na-eku ume na nke siri ike nke nwere akwa akwa hypoallergenic dị n'ime.Akpụkpọ ahụ gị ga-enwe ekele maka nri dị ụtọ nke bọọdụ ab flattening a.
● Ngwaọrụ na-efegharị efegharị n'okpuru: Bọdụ liposuction ab bụ ergonomic na mgbe ị na-etinye uwe mkpakọ mgbe ịwa ahụ gasịrị, ọ ga-abụ nke a na-adịghị ahụ anya n'okpuru ya.Ị ga-enwe ike iyi uwe kachasị amasị gị ka ị na-enwekwa mmetụta na-adaba adaba nke bọọdụ afọ a n'enweghị onye ọ bụla hụrụ ya.Na mgbakwunye, "nku" dị n'akụkụ ga-ejikwa abs gị n'akụkụ.
SURDY & SOFT: Bọdụ Lipo ịwa ahụ post a bụ nke polystyrene,
Nhazi "WING": Ezubere bọọdụ Lipo Ab anyị ka ọ dị ka urukurubụba iji chịkwaa akụkụ afọ gị, nwere ike kechie afọ gị na úkwù iji kpuchie nnukwu ebe.
Ọsọ mgbake: Yiri bọọdụ afọ a n'ime nwere ike inye mkpakọ siri ike na afọ & mpaghara lumbar iji belata mbufụt nke nta nke nta, gbochie nchịkọta mmiri mmiri, zere ihe mgbu & nweta mgbake zuru oke.Ọ ga-enyere aka na usoro mgbake nke liposuction ma ọ bụ tummy tuck.
Egwuregwu Kachasị Mma: Enwere ike iji bọọdụ ab a yana akwa akwa njikwa ihe na-ebuli elu, ị ga-enwe ike iyi uwe ọkacha mmasị gị ma na-enwe mmetụta dị nro nke bọọdụ afọ a n'enweghị onye ọ bụla hụrụ.
Nhọrọ dị mma: bọọdụ mkpakọ afọ a na-arụ ọrụ dị mkpa iji zere nguzobe nke fibrosis ma ọ bụ ọnya mgbe ịwa ahụ rọba abdominal, dị mma maka ngalaba C-Section, Liposuction, Post Op na Tummy Tuck.